ဘယ်ခေတ်မှ မရှိဘူးသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ကရင်ပြည်သူများ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘယ်ခေတ်မှ မရှိဘူးသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ကရင်ပြည်သူများ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရ
ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်သို့ တက်လှမ်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး လူ့အခွင့်အရေး ယခင်က ထက် ပိုမို ရရှိလာသည့် အချိန်ကာလဖြစ်သော်လည်း ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ခေတ်အဆက် ဆက်ကပင် မရှိခဲ့သည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ၊ လူ့အခွင့်အရေး တို့ ချိုးဖောက်ခံနေ ရသည့်အပြင် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်မရှိ ပိတ်ပင်ခံရသည်။
ဘာသာ၊ သာသနာကိုကာကွယ်ရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတစ်ချို့သည် ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ ကိုချိုးဖောက် လာကြသလို နိုင်ငံတော်မှ ကျင့်သုံးနေသော ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကိုပင် ကျင့်သုံးခွင့်မရှိအောင် လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုကို တားမြစ် လာကြသည်။
ဘာသာမ တူသူများနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန် ၊ အိမ်ခြေရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုရန် ကရင် ပြည်နယ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာ တော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ က ၁၀.၉.၂၀၁၂ နေ့တွင် စည်းကမ်းချက် လေးချက်ပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီး အမှတ်(၈၁) ဂလိုဘယ်ပို့စ် ဂျာနယ်မှ ယင်းသတင်းကို အောက်တိုဘာ (၁၉)ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ နေ့တွင် မျက်နှာ ဖုံး သတင်းအဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဘားအံမြို့ မဲဘောင် ကျောင်း တိုက်တွင် ၁.၁၂.၂၀၁၂ ပြုလုပ်သော ကရင် ပြည်နယ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာတော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ က အစည်း အဝေးမှ ခွင့်ပြုလာလ ကုန်ဆုံး ပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးမည့် ကာလ ရောက်ရှိလာ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထံ သတိပေးနှိုးဆော်လွှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းသတိပေးနှိုးဆော်လွှာတွင် ဘာသာခြားဆိုင်များသို့ ပစ္စည်း သွား ရောက် ၀ယ်ယူပါက ရဟန်းတော်ဖြစ်လျှင် ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀၀၀ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် လျှင် ကျပ်ငွေ ၁၀၀၀၀၀ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မဲဘောင်ကျောင်းတိုက်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအခန်း(၁) နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ အပိုဒ် (၃၅) တွင်ပြဌာန်းထားသော ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကို လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့သည်။
“ ဘာသာခြားတွေနဲ့ စီးပွားရေး မလုပ်ဖို့ တခါမှ တားမြစ်တာ မကြုံဖူးဘူး။ ဒီလိုကြေညာလိုက်တော့ မွတ်စလင် တွေကို လည်းဈေးမရောင်းရဲ ၊ မွတ်စလင်တွေဆီကလည်း ဈေးမ၀ယ်ရဲ ဘူး။ ဒဏ်ရိုက်ခံထိမှာ စိုးတယ် ” ဟု ဘားအံမြို့ရှိ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ယင်းသို့ ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ဘားအံမြို့၊ လှိုင်းဘွဲ့ ၊ ကော့ကရိတ်၊ ကျုံဒိုး မြို့များတွင် အရောင်းအ၀ယ် သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ရပြီး ကျေးလက်နေ ကရင်လူမျိုးများ မြို့တက်ဈေးဝယ်မှု နည်းပါးခဲ့ရသည်။
“မြ၀တီလမ်းမှာ အဖမ်းအဆီးရှိတာရော၊ မွတ်စလင်နဲ့ ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်ရင် ဒဏ်ရိုက်မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တာရော ၊အဲဒါတွေကြောင့် ဈေးရောင်းဝယ်မကောင်းဘူး” ဟု ကျုံဒိုးမြို့ရှိ ဈေးသည် တစ်ဦး က ပြောပါ သည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ၊ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်မှု များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာ၊ လူမျိုးမခွဲခြားပဲ နိုင်ငံသားတိုင်း တူညီသော အခွင့်အရေးရရှိစေရမည် ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၈) အပိုဒ် ၃၄၉ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ)နှင့် (ဃ) တွင် ပြဌာန်းထားသော်လည်း ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အချို့ သည် မိမိလိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ဘာသာခြားထံမှ ၀ယ်ယူရန် ကြောက်ရွံ့ နေကြသည်။
“ဘာသာခြားဆီက ဈေးဝယ်ရင် ဒဏ်ငွေရိုက်မယ်ဆိုတော့ ရဲကပဲရိုက်မလား၊ ဘုန်းကြီးကပဲရိုက်မလား တော့ အသေအချာမ သိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာသာခြားဆီမှာတော့ ဈေးမ၀ယ်ရဲဘူး” ဟု နဘူးရွာမှာ ကရင်အမျိုးသမီး ကြီးက ပြောပါသည်။
၀မ်းစာရေးအတွက် ပင်ပန်းကြီးစွာရုန်းကန်နေသူ ၊ကရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ကလည်း ဘုန်းကြီးများ၏ ယင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို အလေးမထားနိုင်ပဲ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘာသာမခွဲခြား ရောင်းဝယ် ဖောက် ကားလိုကြသည်။ “ကျွန်တော်မှာ မိသားစုကြီးတယ်။ ကလေးခြောက်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့တွေ စားဝတ် နေရေးအတွက် တော်တော်လုံးပန်းနေရတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကြေညာချက်ထုတ်တာကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ် စီးပွားရေး မပြေလည်ရင် ဘယ်သူကမျှ ဘာမှပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဘာသာဝင်နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တော့ စီးပွားရေး လုပ်မှာပဲ ” ဟု လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ် ဒေါ်လန်း ကျေးရွာနေ ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ဤသို့သော ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေရန် လှုံဆော်မှုများကြောင့် ကရင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်လာ မည်ကို ကရင်ပြည်သူများ အထူးစိုးရိမ်နေကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကရင်ပြည်နယ် ဟာ လွတ်လပ်ရေး နောက်ပိုင်း ကတည်းက မငြိမ်းချမ်းခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီကြာခဲ့ပါပြီ။ အခု ကေအန်ယူနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့လို့ အရင်ကနဲ့ မတူပဲ ငြိမ်းချမ်းလာ ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့တတွေ ၀မ်းသာနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရရုံရှိသေး ဘာသာ၊ သာသနာ ကာ ကွယ်ရေးလို့ ဆိုပြီး တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားအောင် အစ္စလာမ် ဘာသာကို တိုက်ခိုက် တဲ့ စာရွက်တွေ၊ ဒီဗွီဒီ အခွေ တွေ ပျံ့နှံလာခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်တာတွေ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ ဘာသာဝင်တွေ အ ချင်းချင်း နားလည်မှု လွဲပြီး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာမှာ စိုးပါတယ်” ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသူ ကရင်လူငယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျင့်သုံးနေသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသား အခွင့် အရေး ကို လည်းကောင်း ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ အပြားက လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ ဘာသာပေါင်းစုံတို့ ယခင် ကထက် ရရှိခံစားနေကြ သော်လည်း ဘာသာရေး မုန်းတီးမှု ဖြန့်ချီနေကြသော ဘုန်းကြီးအချို့၏ ထုတ်ပြန် ချက်ကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ သည် ယင်းအခွင့်အရေးကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးနေပါသည်။
This entry was posted on January 15, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အရှုံးကနေ အနိုင်ပြန်ရနိုင်ပါသည်။သို့ သော်အရှုံးမပေးရန်နှင့်မရပ်တန့် ရန်သာအဓိက ကျပါသည်။ …
အတန်းပိုင် ဆရာမက ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားအား ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းအား မကျေနပ်၍ ပညာရေးမှူးထံ တိုင်ကြား →